चीनमा नौ दिनदेखि खानीमा फसेका श्रमिकलाई औषधि तथा खाना पुर्‍याउन सफलता - Sankalpa Khabar
4. विप्लवजी मैले कोरेकै गोरेटोमा आइपुग्नु भयोः दाहाल
5. ‘वेटिङ’ प्रधानमन्त्री हुँ, तर दौडमा छुइँनः सभापति देउवा
६ माघ १८:४०
नौ दिनदेखि खानीभित्र फसेका चिनियाँ श्रमिकहरूका लागि खानीभित्र खाना र औषधि पठाउन सफल भएको मंगलबार चिनियाँ अधिकारीहरूले उद्धारकर्तालाई उद्धृत गरी जानकारी गराएका छन् ।
औषधि तथा खानेकुरा तीनवटा च्यानलबाट खानीमा पठाउन सफल भएपछि श्रमिकहरूको उद्धारमा सफलता मिल्ने आशा बढेको उद्धारकर्ताहरूले मंगलबार जानकारी गराएका छन् । खानीको करिब ५ सय मिटरको गहिराइमा उनीहरू फसेको उल्लेख गरिएको छ ।
पूर्वी चीनको शेन्दोङ प्रान्तको यान्ताई नजिकै रहेको सुनखानीमा जनवरी १० मा विष्फोट भइ पहिरो खस्दा २२ व्यक्ति खानीभित्र फसेका थिए । उनीहरू खानीबाहिर आउनका लागि बनाएको भर्याङ भत्किएपछि बाहिर निस्किने बाटो अवरूद्ध बनेको थियो ।
गत शनिबार खानीभित्रबाट सहयोगका लागि आवाज (सङ्केत) आएपछि खानीभित्र फसेका कामदारलाई जीवितै उद्धार गर्ने आशा पलाएको थियो । आइतबार उनीहरूसम्म तार पुर्याइएको थियो र तारमा श्रमिकले आफूहरूमध्ये करिब एक दर्जन व्यक्ति खानीभित्र पानीले घेरिएको अवस्थामा जीवितै रहेको भन्दै औषधि तथा उद्धारका लागि आग्रह गरेका थिए । खानीमा फसेका १० जनाको अवस्था भने अहिलेसम्म अज्ञात रहेको बताइएको छ । पत्रमा आफूहरूमध्ये धेरैजना घाइते भएका उल्लेख गरिएको छ । भोकले निकै कमजोर बनेका दुई श्रमिकले खाना पाएपछि पुनः माथि चढ्ने बल मिलेको समेत फसेका श्रमिकले उद्धारकर्ताहरूलाई सन्देश पठाएका छन् ।
उद्धारको काम भइरहे पनि निकै खानीको प्रकृतिले गर्दा प्रगति निकै सुस्त रहेको स्थानीय सहरका एक उच्च अधिकारी चेन फेईले बताए । उनले ग्रेनाइट (पथ्थर) फोडेर उद्धार गर्नुपर्ने भएकोले सुस्त नतिजा आउको पुष्टि गरे ।
फसेका श्रमिकहरू रहेको स्थानमा धेरै पानी भएकाले यो उनीहरूका लागि खतरा हुनसक्ने उनले बताए । चेनकाअनुसार खानीमा करिब दुई दिनका लागि खाद्यान्न पठाइएको छ भने सम्पर्कका लागि एउटा टेलिफोन लाइन पनि उनीहरूलाई उपलब्ध गराइएको छ ।
१७ फाल्गुन १५:०७
भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा फ्रान्सका पूर्वराष्ट्रपति निकोलस सार्कोजीलाई तीन वर्ष…
१८ फाल्गुन १३:१०
२१ फाल्गुन १७:०३
ट्रम्पले नयाँ दल नखोल्ने, २०२४ मा राष्ट्रपतिको उम्मेदवार बन्न…
१७ फाल्गुन १३:०१